Intokomalo abancwabi benikelele abahlwempu abangcwabi | News24
Intokomalo abancwabi benikelele abahlwempu abangcwabi
INHLANGANO yabangcwabi eyaziwa ngeSouth African Funeral Practioners Association ibuyisele emphakathini ngokunikela ngo kudla nezingubo ekhaya lezintandane Ekujabuleni Children’s Home ese-Edendale nekhaya labadala nabagulayo eMbali iSiyaphilisa Community Based Care Centre.
Le nhlangano inikele ngezingubo zokulala ezingama 30, ukudla namanabukeni eSiyaphilisa, yaphinde yanikela ngezingubo zokulala ezingu-45 ekhaya lezintandane ngeledlule.
Okhulumela le nhlangano uNkk Thembi Molefe uthe bahlale phansi njengenhlangano, babuka ukuthi kubalulekile ukuthi babuyisele emphakathini.
Le nhlangano yabangcwabi yasungulwa eminyakeni engamashumi edlule ngenhloso yokugqugquzela ubumbano kubangcwabi nokusenenzisana lapho kunesidingo khona.
UMolefe uthe ukubuyisela emphakathini bekuyinto abayenza okukuqala ngqa kulonyaka futhi bahlose ukuqhubeka nakho minyaka yonke.
“Sibe sesibheka abantu abahlwempu emphakathini, savumelana ngokuthi asiye kula makhaya womabili, ngoba abantu abahlala khona abanayo imindeni ebhekelele izidingo zabo. Kokuncane esinakho, sithe asilule isandla, ngoba kubalulekile ukuthi kulokhu okuncane uNkulunkulu akubusise ngakho, ukwazi ukubusisa nawe abanye. Ngalokhu siphonsa inselelo nakwabanye abanotho ukuthi basize baphe labo abahlwempu ngoba ngeke uhulumeni wethu asenzele konke,” kushoe uMolefe.
Umphathi weSiyaphilisa Community Based Care Centre uNkk Tu Zondi uthe bajabule kakhulu ngalo mnikelo, ikakhulukazi njengoba wenzeke ngesikhathi noxhaso abalutholayo lugqoza.
“Siyabonga ngendlela eyisimanga njengoba kusebusika, nesidingo sezingubo zokulala siphezulu. Kuningi nje abasisize ngakho okubalwa namanabukeni. Lo mnikelo ufike ngesikhathi lapho isimo singesihle, njengoba kungekho mnyango osixhasayo, kodwa siphila ngeminikelo evela ezinhlanganweni ezihlukene.” kusho uZondi